မြေဇာပင် တဖြစ်လဲ လိုင်ဇာမြို့ | ဧရာဝတီ
မြေဇာပင် တဖြစ်လဲ လိုင်ဇာမြို့
လဖိုင်| January 19, 2013 | Hits:4,478
11 | | လိုင်ဇာမြို့က နေခွာဖို့ဆိုတာ လိုင်ဇာမြို့ပေါ်မှာ နေထိုင်သူများအနေနဲ့ မစဉ်းစားဖူးတဲ့ အကြောင်းအရာသစ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ – ၁၅ တုန်းက လဂျားယန်ဘက်မှာ လေယဉ်ပျံဝဲတော့ အိမ်တိုင်း ကတုတ်ကျင်းတွေ တူးပြီး ကြံကြံခံဖို့ ပြင်ဆင်ထားပေမယ့် မြို့ကို စွန့်ခွာပြေးဖို့ဆိုတာကတော့ မစဉ်းစားဖြစ်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ လိုင်ဇာက လူနေရပ်ကွက်ထဲကို လက်နက်ကြီးနှစ်လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၊ လူ ၃ ဦးသေ၊ ၃ ဦး အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရပြီးနောက်ပိုင်းတော့ အရပ်ထဲမှာ ပြောင်းဖို့ရွေ့ဖို့ စဉ်းစားကြသလို တကယ် ပြောင်းသွားတဲ့ သူတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
အရင်က လက်နက်ကြီးသံ ကြားလည်း အပြုံးမပျက်နေသူ လိုင်ဇာမြို့သားတွေလည်း အခုတော့ လက်နက်ကြီးသံ ကြားရင် အရင်လို မပြုံးနိုင်တော့ပါဘူး။ စကား ၀ိုင်းပြောနေရင်တောင် “ဝုန်း” ဆို အသံကြားတာနဲ့ “နားထောင်စမ်း … နားထောင်စမ်း” …။ “အေး … တို့ဘက်မဟုတ်ဘူး … ဆက်ပြော … ဆက်ပြော” ဆိုတဲ့ အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် အစိုးရစစ်တပ်ဟာ မှန်းမရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေခဲ့ပြီး မြို့ထဲကိုပဲ ထပ်ပစ်ဦးမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေက စိတ်မအေးစေပါဘူး။ တရုတ်ဘက်ကိုလည်း လက်နက်ကြီးတွေ ကျနေပါတယ်။ ၁၇ ရက်နေ့မှာ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်တဲ့ လက်နက်ကြီး ၄ လုံးကျတယ် ဆိုတာကတော့ မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် လျှော့ပြောတာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်ကတော့ ၆ လုံးလောက် တရုတ်မြေပေါ် ကျတာပါ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၁၆ ရက်တွေမှာလည်း အစိုးရစစ်တပ်ကပစ်တဲ့ လက်နက်ကြီးတွေဟာ လိုင်ဇာကိုကျော်ပြီး နားဘန်းမြို့ထဲကို ကျသွားပါသေးတယ်။ ကျသွားတဲ့နေရာရဲ့ အပျက်အစီးတွေကိုတော့ တရုတ်ဘက်ခြမ်းက အာဏာပိုင်များက ချက်ခြင်းပြင်ဆင် ဖာထေးရုံသာမက ဓတ်ပုံရိုက်ခွင့်လည်း မပေးပါဘူး။
လိုင်ဇာမြို့ကနေ ပြောင်းသူအများစုကတော့ လိုင်ဇာ တဖက်ကမ်းက တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ဒယ်ဟောင်ခရိုင်၊ နာဘန်းမြို့ကို ပြောင်းကြပါတယ်။ ပြောင်းရွှေ့ကြတဲ့ သူတွေကတော့ လိုင်ဇာမှာ လာရောက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ၊ ဟိုဘက်ကမ်းမှာ ဆွေမျိုးသားချင်းရှိသူတွေ အများစု ဖြစ်ကြပါတယ်။
လိုင်ဇာ ဒေသခံများအဖို့တော့ လိုင်ဇာဟာ နောက်ဆုံးနေရာဖြစ်လို့ ဒီထက်ကျော်ပြီး ပြေးဖို့မရှိသလို ပြေးစရာလည်း မရှိပါဘူး။ တချိန်တခါက ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ လျမ်းလျမ်းတောက်ခဲ့တဲ့ လိုင်ဇာအဝေးပြေးကားဝင်း၊ ညလုံးပေါက် ဖွင့်လေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်များ၊ မိုက်ကလေးနဲ့ ဟဲချင်သူများအတွက် ဖောချင်းသောချင်းများခဲ့တဲ့ ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွေ အခု မရှိတော့ပါဘူး။
အရင်တုန်းက ရောင်းသံဝယ်သံတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ အသံတွေနဲ့ နေ့သစ် စတဲ့လေ့ရှိတဲ့မြို့ဟာ အခုတော့ မိုးမလင်းတလင်းကတည်းက လက်နက်ကြီးသံနဲ့ စတင်ပါတယ်။ အရင်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ခေါက်ဆွဲဆိုင် ဆိုင်ပေါင်းစုံပေမယ့် အခုတော့ ရွေးချယ်စရာ နည်းနည်းနဲ့ပဲ ကျေနပ်ရပါတယ်။ ခြောက်ကပ်နေပေမဲ့ ဈေးထဲက ဈေးဆိုင်ကြီးတွေကတော့ တာဝန်ကျေ ဖွင့်နေတုန်းပါပဲ။ မနက်ခင်း သုတ်သုတ်နဲ့ ဈေးဝယ်၊ ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီး အိမ်ထဲမှာပဲ အောင်းနေပါရပါတယ်။
လက်နက်ကြီးသံများ ကြားရင်ဖြင့် “ဒါကတော့ ဘယ်ဘက်ကို ကျလောက်တယ်”၊ “ဟာ … ဒါကတော့ဖြင့် နီးလာပြီးဟေ့” အစရှိသဖြင့် မှန်းဆရင်း လေယဉ်ပျံများ ရောက်လာရင်တော့ ထွက်ကြည့်ကြ၊ ဘယ်နှစီး၊ ဘယ်နှစ်ခါပြန်ပြီဆိုပြီး ရေတွက်ကြနဲ့ အချိန်ကုန်လွန်ကြရပါတယ်။
လမ်းမတွေပေါ်မှာတော့ အသွားအလာမရှိဘဲ မဖြစ်မနေသွားရမယ့် သူတွေသာ လှုပ်ရှားသွားလာနေကြပါတယ်။ လက်နက်ကြီး ကျခဲ့တဲ့ ခကျန် ရပ်ကွက်က လူတွေကတော့ အသစ်တိုး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအနေနဲ့ ၁၀ မိနစ် လမ်းလျှောက်စာလောက် အဝေးက လိုင်ဇာမြို့ အလယ်တန်းကျောင်းကို ပြောင်းပြီးနေရပါတယ်။ မနေလို့လည်း မရပါဘူး။ ၁၄ ရက်နေ့ မနက်ရော ညမှာပါ အဲဒီ ရပ်ကွက်ထဲကို လက်နက်ကြီးတွေ ကျခဲ့တာကြောင့် အားလုံးပြောင်းရွေ့ကုန်ပါတယ်။
နေ့လည်နေ့ခင်းမှာတော့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး ရေချိုး၊ ထမင်းချက်၊ လုပ်စရာရှိတာလုပ်။ ပြီးရင် ညနေ နေ၀င်ချိန်မှာတော့ အထုပ်အသီးသီးစွဲပြီး လုံခြုံရာဆီသို့ အလျှိုလျှို ပြန်သွားကြပါတယ်။ အဲဒီအခါများမှာ ဆိုရင်တော့ ခကျန်ရပ်ကွက်ဟာ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်ပြီး အလွမ်းဓာတ်ခံရှိသူများ မျက်ရည်စို့စေမဲ့ အချိန်အခါပါ။
မြစ်ကြီးနား ဟိုတယ်၊ ရှင်းလီ ဟိုတယ်၊ ဆင်မ်ဆ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းတွေ စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေရှိတဲ့ ခကျန်ရပ်ကွက်ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားမူကတော့ သက်ပြင်းချ မျက်ရည်စို့စရာပါ။ ညနေခင်းဆိုရင်တော့ ကိုယ်လုံခြုံတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆီကို အလျှိုလျှိုသွားတဲ့လူတွေ၊ ဘုရားကျောင်း သွားတဲ့သူတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ညနေစာ အဆာပြေအတွက် လိုင်ဇာနာမည်ကြီး အကြော်ဆိုင်ကတော့ ရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ည ၇ နာရီဆိုရင်တော့ တမြို့လုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီး ရိုမန်ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များရဲ့ မြို့လုံးပတ်လည် လမ်းလျှောက်ဆုတောင်းမှု ပြီးဆုံးရင်တော့ လိုင်ဇာမြို့ဟာ ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။ လူသံ စက်သံ ငြိမ်ပေမယ့် လက်နက်ကြီးသံကတော့ ပုံမှန်ကြားနေရဆဲပါ။
အိမ်ထဲမှာတော့ ဘီဘီစီ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ဗီအိုအေ၊ ဒီဗီဘီ နားထောင်ကြည့်ကြ၊ ဘယ်သတင်းဌာနကတော့ ဘယ်သတင်းကို ဘယ်လိုရေးတယ်၊ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် သုံးသပ်ကြပါတယ်။
မရဲသော်လည်း ပြေးခဲစေဆိုတာတော့ လိုင်ဇာသားတွေအတွက် အလွန်သင့်တော်တဲ့စကား ဖြစ်ပါတယ်။ လေယဉ်ပျံလာလိုက်၊ လက်နက်ကြီးသံကြားလိုက်၊ ကိုယ့်ရှေ့မှာပဲ အရပ်သားတွေ သေတာမြင်ရတော့ ကြောက်တော့ကြောက်တာ မှန်ပေမယ့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) အခြေစိုက်ရာမြို့ လိုင်ဇာသားတွေကတော့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လိုင်ဇာမှာ နေနေကြတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိ လိုင်ဇာသားတယောက်ကို အေးဆေးပဲလားလို့ မေးမိရင်တော့ အေးဆေးပါလို့ ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်။ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ အစိုးရစစ်တပ်ကသာ မြို့ထဲကို ထပ်မပစ်တော့ဘူး ဆိုရင်ပေါ့။
မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်တဲ့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ “အမေများအဖွဲ့”
အလွဲများနဲ့ မျဉ်းပြိုင် (အပိုင်း ၂)
13 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Mr Kian January 19, 2013 - 1:01 pm	we are stand with you, kACHIN…
Reply	Monn A January 19, 2013 - 3:10 pm	where?On the bed?
Reply	juzz January 19, 2013 - 2:22 pm	လိုင်ဇာမြို့ခံတွေကတော့ မြန်မာစစ်တပ်ဝင်လာရင် လိုင်ဇာကိုတော့အကျမခံဘူး အကုန်အသေခံမယ်လို့ပဲ ပြောကျပါတယ်…နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ အလောင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…စဉ်းစားကြည့်ပေါ့…လူသတ်တရားခံတွေဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာ…မနေ့ညကလည်း ထိုးစစ်ရပ်ပြီလို့ပြောတယ် ခုလည်း မော်တာတွေ ဗုံးတွေပြန်ချနေတုန်းပဲ…”ဆေားရီး ရှေ့တန်းကို သတင်းပို့တာ နောက်ကျနေလို့ပါလို့ပြန်ဆင်ခြေတက်ဦးမှာလားဟင်”
Reply	william January 19, 2013 - 3:54 pm	English ခေတ် Japan ခေတ် တောင် ဒီလောက်မဆိုးခဲ့ဘူး။ ကချင်ဒေသမှာ အခုလို ဖက်စစ် ဗမာတွေက လာပြီး အနိုင်ကျင့်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ကလေးတွေကတော့ ဗမာဆိုရင် လုံးဝကို မုန်းသွားပြီ။ ဖက်ဆစ်ဗမာတွေဆိုပြီ ခေါင်ထဲဝင်သွာပြီး။။။။။
Reply	mg mg nyunt January 21, 2013 - 11:47 am	ုkia ကရော ဘာလဲ မင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်လို့ထင်လား စစ်မှဖြစ်ရင် စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကသက်ရှိအားလုံး စစ်ရဲ့ဒဏ်ကိခံရမှာပဲ စစ်ဖြစ်ရင် အင်အားကြီးသည်ဖြစ်စေငယ်သည်ဖြစ်စေ နှစ်ဘက်လုံးမှာအပြစ်ဖြစ်ပါတယ် စစ်တယ်ဟာ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ကိုယ့်စားပြုပါ ဗမာလူမျိုးလဲစစ်တပ်အောက်မှာပဲရှိပါတယ် မင်းတို့ကသွေးခွဲနေခြင်ရင်တော့ငြိမ်းခြမ်းရေးကိုမမျှောလင့်ပါနဲ့
Reply	mr peace January 23, 2013 - 8:30 pm	အခုဖြစ်နေတာက နေပြည်တောမှာလား ရန်ကုန်မှာလား မန္တလေးမှာလား မခံရဘူးတယ့်သူက တော့ အေးအေးဆေးဆေးပြောနိူင်ကြ မှာပေါ့
Reply	စိုင်းမြတ်သူ January 19, 2013 - 5:13 pm	မပစ်ပါနဲ့
Reply	kumudra January 21, 2013 - 1:07 pm	Please be fair.
Why only blame/protest the Army and Government fighting KIA/KIO?
Why did not blame or protest KIA/KIO for their destructive actions that took many innocent lives by their mines as well?
No one asked/protest KIA to exchange their weapons with peace.
Did KIA represent and protect the whole Kachin people and Kachin State? From who and how?
Did Kachin states belongs to only KIA and Kachin?
How about all others ethnic groups or tribes or whatever(not Kachin) residing there?
Has KIA better ability/eficiency than Government to develope Kachin State and others?
Please someone shows us example what did they do/build for the Kachin state/people from the huge income money that they have earned from the Kachin State’s resources? Destructions?
KIA (KIA leaders)want power(with guns)and money(with business),no matter what kinds of goverment in this country, they will have many reasons to hold the guns and fight for their power and wealthy, the same, never change.
If there is peace, they will have no arms, no power, no free business and free benefit so why they want peace?
Most of others armed groups are making peace and participating, joining hands with Government for our country’s future development.
Most of democracy developed countries in the world, there is only one armed group (military), never allow other armed groups.
Should Army surrender to KIA/KIO and several armed groups or they surrender to Army to get peace in our country?
Our people are not stupid to follow those coward people who ran away and residing in overseas, named/set many organization, then showing some activities, protest, opposing matters to the Goverment to get/beg money from international donors.
Anyway,all parties,let’s join hands with optimism for our country.
Reply	kachin brother January 23, 2013 - 6:38 am	hay, kumudra
be careful!!! kachin has many resources. burmese government owned nothing. not only kachin but also all the other6states owned many resources. no divisions ‘7’ where burmese people lives has owned nothing. they only one what they owned is ‘NGAPIH’. the burmese have been taking, selling, stealing…and so on… our precious things from our states. may i reply you… ‘yes’ kachin people can manage their own resources and control their land and can surely lead the kachin people without the help of burmese. just say to your government .. ‘to retreat all their coward soldiers immediately and live peacefully at their own place , divisions, and sleep well with their fucking mothers….actually, i do hate the burmese soldiers, they are liers called ‘SATAN’, but not all the burmese…understad! don’t speak loudly, be careful!
from Kachin brother
Reply	kumudra January 23, 2013 - 4:27 pm	Dear Kachin Brother,
Please read carefully what i have written.
May be you did not understand well what i meant.
I didn’t wrote about that Kachin people can manage their own or not.
You comment/reply is just trying to divide between burmese and other ethnics.
Please be advised do not try to divide our country and our people like KIA/KIO.
Most of people in Myanmar (all ethnics)did not support your armed groups (exceptafistful of people)otherwise our country will be governed by KIA/KIO since decades ago 🙂
Reply	Hnin Hnin January 24, 2013 - 10:12 am	We should need to know why government fight heavily? Peoples from Liza are Kachin or chinese? Our race are very simple and honest. Who take advantage from our race? Actually, we’ve to think carefully and we need to unity.
Reply	Seng Naw January 25, 2013 - 1:05 pm	ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တပ်ဆိုတာက တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်နေတာပါပဲဗမာကြီးပဲလဲမဟုတ်ပါဘူးချင်းတွေရှမ်းတွေလဲပါဝင်နေပါတယ် လူမျိုးရေးလို့မသတ်မှတ်ပဲ စစ်တပ်ကိုသာအားလုံးအတူတကွ တိုက်ဖြတ်ရမှာပါလွှတ်တော်ကလဲထိုးစစ်မဆင်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းသလိုသမ္မကြီးဦးသိန်းစိန်ကလဲထိုးစစ်မဆင်ပါဘူးလို့တ၇ားဝင်ပြောထားပါတယ်ဒါတွေကိုနားမထောင်ဒါတော့မင်းအောင်လှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအပြတ်ဖြုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီတော့အားလုံးပဲစစ်တပ်ကိုအပြုတ်သာတိုက်ပေတော၊့
Reply	Seng Naw January 25, 2013 - 1:19 pm	ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တပ်ဆိုတာက တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါဝင်နေတာပါပဲဗမာကြီးပဲလဲမဟုတ်ပါဘူး
ချင်းတွေရှမ်းတွေလဲပါဝင်နေပါတယ် လူမျိုးရေးလို့မသတ်မှတ်ပဲ စစ်တပ်ကိုသာအားလုံးအတူတကွ တိုက်ဖြတ်ရမှာပါလွှတ်တော်ကလဲထိုးစစ်မဆင်ဖို့ရန်တိုက်တွန်းသလို
ငရဲတွင်းမှ အမေ့ခံ ဘ၀များ
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲမှာ စစ်ပြန်တွေ နောက်ကျန်နေ
အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောသို့ အလည်သွားခြင်း
အမေရိကန် ပိတ်ဆုို့မှု ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် သက်ရောက်မှုများ
တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ဝေးနေဦးမလား